Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » Yintoni eNtsha eBahamas ngo-Okthobha
Ukhenketho lokuzonwabisa • Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • umculo • iindaba • Resorts • Imitshato yothando • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Lixesha lokuba ubhukishe ubaleke! Nokuba ukhetha ukuphumla kunxweme olunentlabathi emhlophe okanye ulayishe uhambo ngeendlela ezonwabisayo, iindwendwe zamkelekile ukuba zive ukuba kutheni "Kungcono eBahamas" ngendawo yokuhlala eyaziwayo emhlabeni, ukunyuka kweenqwelomoya kunye nokutsala okutsha.
Iziqithi zeBahamas zigoduke neembasa ezininzi ezahluka-hlukeneyo kumacandelo ahlukeneyo kuKhenketho oluLindelwe kakhulu lonyaka “kwiiMbasa eziBalaseleyo zeHlabathi.”
Ikwafumene amagama angama-20 abakhethiweyo kwii-2021 zeCaribbean Travelers 'Choice Awards. Kwi-Intanethi.
Ukuvota kwi-Intanethi kwiiMbasa zabaHambi beeNdawo zokuHamba ngeCaribbean kuvalwa ngo-Okthobha 31, 2021.
IBahamas Ikhanya ngokuKhanya ngoKwaziwa kweHlabathi -Iziqithi zagoduka ziphumelela iindidi ezininzi ezinkulu kwiindidi ezahlukeneyo kwi Ukuhamba + Ukuzonwabisa ekulindelwe kakhulu ngonyakaAmawonga aBalaseleyo kwiHlabathi liphela”Kwaye ndafumana amagama atyunjiweyo angama-20 kwi Ama-2021 amaCaribbean Choice Travelers 'Choice. Ukuvota kwi-Intanethi kwiiMbasa zabaHambi beeNdawo zokuHamba ngeCaribbean kuvalwa ngo-Okthobha 31, 2021.
Ukutya kweSLS Baha Mar -Imvumi ephumelele amabhaso eGrammy uJohn Legend uza kudlala e Ukutya kweSLS Baha Mar nge-5 kaNovemba 2021. Amatikiti abandakanya ukutya okumnandi, ii-cocktails ze-bespoke kunye neglasi ye-LVE Rosé. Abazimasi kufuneka babe neminyaka eli-18 nangaphezulu.
I-United Airlines Yazisa ngeeNqwelomoya ezinokuBhukishwa ziye eNassau - United Airlines yazisa inkonzo entsha engapheliyo ngoMgqibelo eNassau isuka eCleveland Hopkins kwisikhululo seenqwelomoya samazwe onke eqala ngoDisemba 18, 2021. Iinqwelomoya ziyafumaneka ukubhukisha ukuqala kukaSeptemba.
Iqhwithi leHole Superyacht Marina eParadise Landing ivulwa kwakhona ngo-2021 - Ngomjikelezo owandisiweyo kunye ne-T-dock yokuqala efakiweyo, INkanyamba iHole Superyacht Marina ilungiselela ukwamkela iindwendwe ezibuyela kwixesha lasebusika le-2022. Iindwendwe zizokonwabela iindawo zokuhlala ezibutofotofo kumgangatho wedokodo, ivenkile ekumgangatho wehlabathi, ukutya okumnandi kunye nezixhobo ezibanzi.
Uluhlu olupheleleyo lweentengiso kunye neephakeji zeBahamas, ndwendwela www.bhahamas.com/deals-packages.
Ukuhamba ngokuzithemba kunye nesiQinisekiso seKhefu leembadada -Sandals Resorts International yazisa Isiqinisekiso seholide seembadada. Iindwendwe zeSandals Royal Bahamian naseEmerald Bay zinokufumana izibonelelo kubandakanya ukubuyiswa kweholide kunye neekhredithi zomoya, akukho ntlawulo yokuhlala yedwa kunye nokucinywa simahla.
UkuHanjiswa okuShushu, isitayile esiBandakanya konke Balekela kwisiqithi iGrand Bahama kwaye ugcine ukuya kuma-40% xa uhlala Indawo yokuKhanyisa ePointe kwiGrand Lucayan Resort. Ifestile yokuhamba ngoku ngo-Okthobha 31, 2021.
Bambelela ehlotyeni ngePakethe zeTropiki -Ukuwa kulapha, kodwa usenako ukugcina ixesha lasehlotyeni lihamba xa ubhukisha ubusuku obuthathu okanye obuthathu IHilton kwiiNdawo zokuHlala zeHlabathi zeBimini. Iipakethe zeTropic eziqala kwi- $ 508 kumntu ngamnye zibandakanya ukuhamba ngeenxa zonke kwiTropic Ocean Airways ukusuka eFort Lauderdale. Ifestile yokubhukisha ngoku ingoDisemba 31, 2021.
Hlala ixesha elincinci eBaha Mar - Iindwendwe zeNdwendwe e Baha Mar ukufumana ubusuku besine mahala xa ubhukisha ukuhlala kwipotfoliyo yehotele kubandakanya iGrand Hyatt, i-SLS kunye neRosewood, kunye nekhredithi eyi- $ 100, ukufikelela ngokungenamda eBaha Bay kunye noVavanyo oluBukhali lwe- "Return Home".
Ukufihla uSuku olongezelelweyo - Iklabhu yaseLwandle, iZiko lamaXesha amaNyaka, iBahamas Inika iindwendwe ubusuku besine bokuncoma kunye nobusuku obulandelayo obulandelayo, kunye nezothutho labucala. Ifestile yokuhamba ngoku ingoDisemba 31, 2022.